Kenya oo kashiftay dan wayn oo ay ku qabtey dalka Afghanistan oo meesha ka bixi karta | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Kenya oo kashiftay dan wayn oo ay ku qabtey dalka Afghanistan oo...
Kenya oo kashiftay dan wayn oo ay ku qabtey dalka Afghanistan oo meesha ka bixi karta
(Nairobi) 18 Agoosto 2021 – Kenya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay in xaaladda cusub ee dalka Afghanistan ay meesha kasii saarto badeecooyin u iib gayn jirtey dalkaasi oo awalba hoos u dhacaysey sanadihii ugu dambeeyey dagaallada ay Daalibaanku wadeen dartood.
Kenya ayaa Afghanistan u iib gayn jirtey badeeco ku kacaysa Sh14 bilyan oo shilin 2012-kii, balse waxay taasi kusoo ururtay Sh3.6 bilyan oo qura sanadkii tegey, kaddib xaalad hubaal la’aan ah oo uu dalkaasi muquurtay.
“Weli wax war ah ma hayno, balse waan ka hadli doonnaa arrintan.” ayay tiri Wasiirka Ganacsiga iyo Wershadaynta, Betty Maina.
Kenya ayaa Afghanistan u dhoofisa Kafeega, caleenta, xawaashka, dharka, balaastiigga, khudaarta, mashiinnada iyo waxyaabaha lagu qaaciyo badeecada. Caleenta shaaha ayaa 30% ka ah waxa ay u dhoofiso Afghanistan.
Kenya ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay inay gebi ahaanba meesha ka baxaan fursadohooda ganacsi ee aadka hoos ugu dhacay kaddib qabsiga dalkaasi ee kooxda Daalibaan oo 20 sano kaddib gacanta ku wada dhigtay Afghanistan.
Previous article”Waxaan gabadha usoo dhaamiyaa biyaha iyaduna waxay i siisaa qaad & quud bilaash ah!”
Next articleDAAWO: Daalibaan oo ay ka hor timid diidmadii 1-aad (Magaalo diiddey in la dejiyo Calanka Qaranka & dad ku dhintay)